मुलुकमा कति छन् अखबार र अनलाइन पत्रपत्रिका ? - Malayakhabar
होम पेज प्रविधि मुलुकमा कति छन् अखबार र अनलाइन पत्रपत्रिका ?
मुलुकमा कति छन् अखबार र अनलाइन पत्रपत्रिका ?
काठमाडौं:= मुलुकभर दर्ता भएका अखबार, पत्रपत्रिका र अनलाईनको सङ्ख्या ७ हजार ८७४ रहेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको ५२ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ४६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८ सम्मको दर्ता अभिलेखअनुसार, देशभरबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या ७४४ रहेको उल्लेख छ ।
प्रादेशिकरुपमा पत्रपत्रिका दर्ता स्थितिको अध्ययनबाट बागमती प्रदेश नै पहिलो स्थानमा देखिएको छ । उक्त प्रदेशमा दुई हजार ६५७ पत्रपत्रिका दर्ता भएको पाइएको छ । काउन्सिलका अनुसार, मुगु र मनाङ जिल्लामा भने अझैसम्म कुनै पनि पत्रिका प्रकाशन भई दर्ता भएका छैनन् । सबैभन्दा बढी पत्रपत्रिका प्रकाशन भई दर्ता भएको जिल्ला काठमाडौँ हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा काठमाडाैँ जिल्लामा दुई हजार अखबार दर्ता छन् । काठमाडौँपछि पत्रपत्रिका दोस्रो धेरै दर्ता भएको जिल्ला पर्सा हो । दर्ता भएका अखबारमध्ये कम मात्र प्रकाशित भएका र प्रकाशित मध्ये पनि सबै नियमित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण देशभर निषेधाज्ञा जारी भएपछि विविध कारणले पनि अखबार प्रकाशनलाई खुच्याएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
उक्त आर्थिक वर्षसम्म देशभर दुई हजार ७६० अनलाइन काउन्सिलमा सूचीकरण भएका विवरणमा उल्लेख छ । पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि ६२२ अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरण भएका छन् । काउन्सिल पत्रकारितालाई मर्यादित, जवाफदेही र प्रतिष्ठाको पेसा बनाउन पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्दै कार्यान्वयनका लागि पहल र नियमन गर्ने संस्था हो । काउन्सिलले स्वस्थ्य पत्रकारिताको विकास गर्दै यस क्षेत्रलाई उच्च मर्यादामा राख्ने मूलभूत उद्देश्य राखेर काम गर्दैआएको छ । रासस
अघिल्लो लेख ब्रिटनी स्पियर्सको बेडरुममा समेत निगरानी, आफ्नै पिताले जासुसी गराएको खुलासा।
पछिल्लो लेख स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी अधिवेशनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा आग्रह।